Akụkọ - Nkọwa Dị mkpirikpi maka akwa Antistatic
Kemgbe ọtụtụ afọ, ajuola m ma ọ bụrụ na akwa anyị bụ ihe na-emebi emebi, na-eduzi ma ọ bụ na-agbasa. Nke a nwere ike ịbụ ajụjụ gbagwojuru anya chọrọ obere obere na injinia ọkụ. Maka ndị anyị na-enweghị oge ahụ anyị dere ederede blog a bụ mbọ iji wepụ ụfọdụ ihe omimi nke ọkụ eletrik na ụzọ iji chịkwaa ya na akwa.
Iji ghọta ihe dị iche na antistatic, dissipative na conductive dị ka ọ metụtara ọkụ eletrik na akwa ị ga-ebu ụzọ ghọta ihe dị iche na okwu mkpuchi na conductive dịka o metụtara eletrik, yabụ ka anyị bido na nkọwa ụfọdụ
Ndị na-eduzi ihe bụ ihe ma ọ bụ ụdị nke ihe na-eme ka ọkụ eletrik na-efegharị n'otu ụzọ ma ọ bụ karịa. Ngwongwo na-eduzi ihe kachasị mma na ọ bụ ya mere eji eji eletrik n'ụlọ gị niile n'ụdị eletriki eletrik, dịka ọmụmaatụ. Ndị insulators bụ ndị na - abụghị ndị na - eduzi ya na ha bụ ihe eji akwụ ụgwọ eletriki anaghị akwụ ụgwọ kpamkpam, yabụ na - amachi ọkụ eletrik.
Laghachi na ihe atụ waya eletrik anyị, ebe ọkụ eletrik na-aga nke ọma site na ọla anaghị agbaba ọfụma site na PVC na akwụkwọ ejiri iji kechie waya eletriki. Ndị insulators na eriri ndọtị, PVC na akwụkwọ, na-egbochi ụgwọ ahụ ịgabiga ha na-enye gị ohere ijide ụdọ ahụ n'atụghị ụjọ.
PVC n'ozuzu na-eme ezigbo insulator, mana enwere ihe ndị enwere ike ịme iji mee ka ihe ndị PVC na-arụ ọrụ. Ọkwa nke iji aka ihe gbanwere ihe omume ya ga-etinye ya n'ime otu ọkwa atọ; antistatic, static dissipative, ma ọ bụ conductive.
Dabere na MIL-HDBK-773A DOD Akwụkwọ ntuziaka ebe a bụ nkọwa ndị a maka nhazi ọkwa atọ a:
Antistatic - Na-ezo aka na ngwongwo nke ihe na-egbochi mmetụta nke ọgbọ triboelectic. Triboelectric ụgwọ bụ ihu igwe ọkụ.
Static Dissipative - Ihe nke ga-ngwa ngwa igbasa electrostatic ebubo n'elu ya ma ọ bụ olu, na-enwe a resistivity nso n'etiti conductive na insulative.
Na-eduzi - Akụrụngwa akọwapụtara dị ka nke na-eduzi elu ma ọ bụ olu. Ihe ndị dị otú ahụ nwere ike ịbụ ọla ma ọ bụ tinye ya na metal, carbon carbon, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-eduzi ma ọ bụ ndị ejirila ihe ndị dị otú ahụ mee ihe site na ịcha mmiri, ịchacha, imezi ọla, ma ọ bụ ibipụta.
Iji chọpụta ma ihe ọ bụla ruru otu n'ime ọkwa atọ a enwere ule enwere ike ịme iji tụọ nrụgide elu nke a tụrụ na ohms / square. N'okpuru ebe a bụ eserese na-esepụta ọkwa dị iche iche dabere na ọkwa nrụgide elu.
Mgbe ị na-ekepụta azịza ngwaahịa gị, ị ga-achọ ịchọpụta ọkwa ọkwa nke ngwa ga-achọ. Ọ dị mkpa na ị ghọtara mkpa nke ngwa a kapịrị ọnụ yana mgbe ị na-emeso ndị injinia ma ọ bụ ndị na-emepụta ihe ga-akacha mma ịjụ maka ọkwa Ohms nke ha na-achọ.